Date My Pet » Pane here chinonzi A Fight Good In Relationships?
Last updated: Sep. 17 2020 | 4 Maminitsi verenga
Kunyange zvazvo mashoko vanoonekwa zvakanaka ukama, pane zvakadai chinhu sezvo kurwa kwakanaka muukama? Hongu pane, zvinoshamisa. Fighting kunobatsira ukama kukura sezvo vaviri kuzivana zviri nani. Sezvo chiri chinhu hazvingadziviswi, vakaroorana vanofanira kudzidza kurwa sei nokururamisira.
Kuziva kurwa sei nokururamisira ari zvikuru kupfuura kuziva nei kurwa yakavapo pakutanga, kunyange zvazvo kuva zviduku kurwa vari kufanira. Kutora nguva panze apo mumwe sokuti vava kuda nahwo zvakakosha chaizvo, sezvo asina kudaro kungatungamirira siyana zvakawanda zvakakomba izvo angadai akadzivisa.
Pamusoro pe, zvakakosha kuti mumwe nemumwe vanofunga kuti vari vanzwa. Haufaniri kuva achishevedzera machisi, sezvo havana kubatsira pakugadzirisa chero, sezvo anoedza sezvo zvingava dzose.
Kana ari kurwisana nomunhu mumwe, edzai kugadzirisa kurwisana zvine rugare, pane kurwisa kuhwinha. zvisinei, sezvo izvi zviri nyore kuzvitaura pane kuzviita, pane vakaroorana mitemo, izvo, kana akatevera, kunogona kuita kuti kurwisana zvakakodzera.
Vakabata hasha hakushandi; asi akaisa kutsamwa kwenyu mhiri kuti mudiwa wako
Kutsamwa zvakasikwa kunzwa, iro rinomiririra marwadzo, kusuwa, unyare uye kunyange kuzvidemba. Inogona kukonzerwa chiitiko chakaitika kare kare kana chiitiko kuitika. zvisinei, vanhu vakawanda havazivi sei kukurira kutsamwa.
Hasha inofanira kuonekwa sechinhu zvakazarurwa, dengetera inobatsira kwomunhu mumwe kukwira pamwe kugadzirisa dambudziko. saka, Kuteerera hasha kuchabatsira kukurira mhaka nharo uyewo kwayo yokugadzirisa zvishoma nyore.
Kupa pasi akundwa haangaiti kuti mumwe gamba
Yaitaurwa havasi rworubatsiro kurera mudiwa wako kuti utera, zvakavanzika kana kunyange kare aputse. Iri yakaderera ichivhuvhuta uye rinoratidza kuti munhu kana akanyanya kuchengeteka mune pachavo ganda ravo, saka, achida kurwisa mumwe wavo kuti pachavo anzwe zviri nani, kana uri gwara ane kumirira anetsana kuti agumise ukama.
Mabasa akadaro vanotya kuitwa ane chinangwa kuti kunyanya kurwadziwa kune mamwe nemumwe anofanira kudziviswa zvachose. Pane kurova munhu pazasi bhandi, ari shamwari vanofanira zvakadzikama zvinenge panze chii kukuvadza naye. Zvino ichi ndicho chii chinoita kuti munhu gamba.
Musakanganwa kuratidza hanya, yemuro, kukoshesa, uye tsitsi
Munhu ane kurwisana kwavo naye pasina anoratidza chero pamusoro kuita chinhu zvakanaka. Ava nemanzwiro inokosha chaizvo, kunyanya vanhu muukama, sezvo manzwiro akadaro anoratidza izvi zvichabatsira nechokwadi kuti vakaroorana nguva dzose kurwa kwakanaka.
Anoyemura hakungosanganisiri rinorwadza kwomunhu mumwe nokuti vanoziva kuti nemumwe ane kodzero wakanaka kurapwa. Tsitsi munhu, Munhu anofanira kutarisa zvinhu kubva pamaonero mumwe munhu.
Regai zhamba, mhere, uye chituko
Ane munhu akamboona kuzvishora ari mamiriro ezvinhu apo havagoni kubatsira asi uti zvose zvakaipa kana kutsamwa, asi vanoziva zviri zvakaipa, asi vachiri vakatsamwa kufunga? Fighting anoita kuti munhu, kunyanya kana vachirwa zvisiri.
Zvakakosha kuti kutora nguva yako usati wapindura hasha. Musanyanya kukurumidza kutaura sezvo mashoko vaizove blurted kuti usingachengeteki rikadzoserwa, pasinei. Vachidanidzira kupopota munhu mapapu panze uye kutuka kwomunhu mumwe chete kunotungamirira kufirwa inzwi, ichimutsa vana uye zvimwe vamwe munharaunda.
Regai kurwa vaine chinangwa kukunda kana kuti kuva mumwe kurudyi
Apo mutsimba nomunhu mumwe, Havaedzi zvakaoma kudaro kuti Kumukundi, sezvo shamwari kuita izvi kuti chete kuva rimwe zvakaipa. Kuedza nesimba saka kuva zvakarurama chete anoenda kuratidza ndivo nepfungwa dzokuti havazozvikwanisi, kwavanhu mhando uyo hatitombodi kuva zvakaipa.
Chii kushandiswa kuhwina kurwa, asi kurasikirwa shamwari? Zvinobatsira here? Mumwe hazvifaniri kudaro akanyura pasi mukuwana kurwa kuti vanotadza kuona sei zvikuru nomumwe wavo zvinovhiringidzika. Zvinotora yakawanda achiedza ngavabude zvishoma uye kuongorora mamiriro ezvinhu, kuona sei munhu angave akonzera kuti kusawirirana.
Havaedzi kupa rinovaka, hazvishandi!
apo kurwisa, regai kutsoropodza mumwe nemumwe, Kufunga zviri achivabatsira nokuti hazvisi. Munhu kuita kurwa dzinowanzoona akatsamwa kwazvo, uye kutsoropodzwa upi wakapiwa panguva ichi ndechedu rokukonzera marwadzo. Chinhu bedzi ichi inowana ndiko kuti munhu mumwe sokuti vakaita chinhu chisingaregererwi uye gomba.
panzvimbo, zvinokurudzirwa kuzovakwirira mumwe nemumwe nokuudza navo chii munhu anoda kuona ramangwana.
Pashure pezvose izvi, chimwe chinhu marin'i chechokwadi. Kune chinhu chakadai kurwa kwakanaka, izvo zvinokosha chaizvo kuti vanhu muukama. Mumwe ane kudzidza kubva pazvikanganiso yavo kunzwisisa kwete chete zvavangaita vakaita kutanga kurwa, asiwo zvavaifanira kuita kuti zviri nani ramangwana. Uyo anogona yokunyatsodzidzira zvakanaka uye wakanaka kurwa unyanzvi ndiko chokwadi kunakidzwa hurefu zvikuru uye anofara ukama.